Wararka - Dabaqa daboolaya wararka
Qeybta LVT gudaheeda, SPC iyo WPC waxay sii wadaan inay iibiyaan iibka. Sawirka waxaa ka muuqda 'Distinction Plus' oo laga soo qaaday aruurinta 'Shaw Floors' Floorté.
Qaybta sagxadda dhulka ee adkeysiga u adkeysata ayaa sii waday korodhkeeda meteoric-ka ee 2019, mana jirto meel ka muuqata oo ka badan qaybta ka tirsan SPC ee qaybta LVT. Kaliya maahan sheyga inuu kaqeyb qaadanayo suuq badan suuqyada tartamaya, laakiin maamulayaasha warshadaha ayaa sidoo kale sheegaya inay cunayaan iibinta alaabooyinka qeybta adkeysiga leh.
"Sii socoshada sii kordheysa ee SPC ee suuqyada ganacsiga iyo guryaha ayaa ah wadaha ugu weyn ee sii kordhaya kororka xoogan ee LVT," ayuu yiri Jeremy Whipple, madaxweyne ku xigeenka horumarinta ganacsiga ganacsiga, Novalis.
FCNews cilmi baaris ayaa muujineysa in suuqa deegaanka uu ka kooban yahay 67% wadarta dakhliga adkaysiga ama $ 3.657 bilyan. Marka la eego mugga, adkeysiga deganaanshaha waxaa lagu tiriyay saddex meelood labo meel sawirada laba jibbaaran oo la soo diray ama 3.38 bilyan oo laba jibbaaran. Inta badan hawshaas waxaa waday LVT la deggan yahay (oo ay ku jiraan xabagta hoos, guji jilicsan, dabacsan, SPC iyo WPC), oo soo saaray qiyaastii $ 3.038 bilyan oo dakhli ah. Marka la eego mugga, adkeysiga deganaanshaha ayaa lagu qiyaasay 1.996 bilyan oo laba jibbaaran.
Soosaarayaasha adkeysiga leh waxay u nisbeeyaan guusha qeybta, qeyb ahaan, xoogga qeybaha isticmaalka dhamaadka. "Suuqyada sida qoysaska badan iyo guryaha la soo saaray waxay arkeen koritaanka maaddaama xaaladaha dhaqaale ay aad u wanaagsanaayeen kanaalladuna ay ku korayeen xawaare rikoodh ah," ayuu yiri Kevin Howell, oo ah agaasimaha sare ee iibka iyo maaraynta wax soo saarka, Beauflor. “Muuqaalka iyo waxqabadka qaybtani waxay soo martay waddo dheer marka loo eego sanadihii la soo dhaafay - waa boodbooyin iyo soohdin meeshii ay ahayd xitaa shan sano ka hor. Runtii waa wax cajiib ah, labadii sano ee la soo dhaafay, wixii aan ku aragnay inay halkaan ku sameynayaan. ”
Laakiin ma ahan oo keliya muuqaalada dhabta ah ee xiisaha xiisaha u leh; waxqabadka ayaa waliba ka guuleysanaya macaamiisha. "Dabaqyada biyuhu waxay ahaayeen mudnaan sare macaamiisha sannadka 2019," ayay tiri Jenne Ross, oo ah agaasimaha suuqgeynta, shirkadda Karndean Designflooring. “Ku iibinta sagxadda dhulka sida‘ biyuhu, ’tani waxay gacan ka gaysatay in laga takhaluso cuqdada ka taagan taaybalka vinylka raaxada leh Waagii hore, macaamiishu way ka warwareegayeen vinyl-ka raaxada maxaa yeelay waxay ku dhex jirtay erayga 'vinyl', maxaa yeelay waxay horay ula soo kulmeen waayo-aragnimo xun.